Any am-piangonana : niteraka resabe ny tsy fitondrana finday… | NewsMada
Any am-piangonana : niteraka resabe ny tsy fitondrana finday…
Naha be resaka na tamin’ny tambajotra sosialy na teny anivon’ny fiarahamonina ny fanentanana nataon’ny filohan’ny FJKM ny amin’ny tokony hitondrana Baiboly sy fihirana rehefa mandeha any am-piangonana fa tsy finday sy “tablette”.
“Betsaka ireo nanakiana izany fanentanana izany. Samy tenin’Andriamanitra no jerena ao ka inona no olana ?”, hoy ny sasany. “Tsy voavonjy any an-danitra ve raha mampiasa ireny fitaovana ireny any am-piangonana ?”, hoy ny hafa.
Anisan’ny fanazavana nentin’ny mpitandrina naneho hevitra anefa fa manaporofo amin’ny fiarahamonina ny fahasahiana mitory filazantsara ny fitondrana Baiboly. Tsy menatra mijoro ho kristianina ary tsy miafina any anaty finday ny soratra masina.
Mampihena ny fifantohana amin’ny fizotran’ny fanompoam-pivavahana ihany koa ny fampiasana finday na “tablette” any am-piangonana raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Betsaka ihany koa ireo kristianina tsy mahay intsony ny toko sy andininy amin’ny baiboly satria zatra mamantam-bonona amin’ny finday raha tokony ho hay tsianjery ny filaharana ao amin’ny Baiboly.
Ny an’ny fiangonana FJKM sasany aza anefa, tsy mitondra Baiboly sy fihirana intsony ny ankamaroan’ny mpiangona satria efa nozarin’ilay fiangonana mamaky eny amin’ny fafana (ecran). Mandeha eny avokoa ny andalan-tsoratra masina rehetra izay vakiana sy ny tononkira….
Fitaovana mamono ny fampielezana ny Baiboly, boky masina ihany koa ny fampiasana finday sy ireny smart Baiboly ireny. Manaporofo izany indrindra ny fitsilopilopin’ny asan’ny fikambanana mampiely Baiboly izay nakatona mihitsy nisy fotoana.
Betsaka ny fanehoan-kevitra saingy raha natao bango tokana dia ireo tanora no tena manohitra ny fampiasana ny finday any am-piangonana.